“Tolo-tanana” : antsa fiderana hanohanana ireo sahirana | NewsMada
“Tolo-tanana” : antsa fiderana hanohanana ireo sahirana
Par Taratra sur 20/06/2018
Manomboka androany ny hetsika samihafa, karakarain’ny fanjakana, ho fanamarihana ny fetim-pirenena. Ho an’ny manan-katao, mandeha ho azy ny fandaniana amin’ny sakafo sy ny kilalao ho famalifaliana ny mpianakavy, mandritra izany. Ny ankamaroany kosa anefa, etsy ankilany, mbola mitady izay harapaka androany.
Manoloana izay indrindra, mikarakara hetsika mitondra ny lohahevitra hoe “Tolo-tanana” ny fikambanana Seho, ho fanampiana sy ho fanohanana ireo ankizy avy amin’ny fianakaviana sahirana na kamboty.
Hotanterahina etsy amin’ny kianja mitafo Ankorondrano izany, ny Alahady 24 jona izao, manomboka amin’ny 3 ora tolakandro.
Antsan-kira fiderana ny “Tolo-tanana” ary maromaro ireo tarika hampanakoako ny feony, hanandratra ny voninahitr’Andriamanitra sy hankahery ny rehetra, amin’io fotoana io. Tsy iza izy ireo fa ny Singers of Jesus, ny GMMC, ny The Voice of God ary ny tarika Antso Fiderana. Vahiny nasaina manokana kosa i Mamy Robison, miampy mpanakanto kalaza tsy ampoizina.
Nambaran-dry zareo ao amin’ny Seho fa mbola maro ny hetsika hokarakarain’izy ireo eto Antananarivo, amin’ity taona ity, fa fanokafana fotsiny ihany io amin’ny alahady io. Hiavaka noho ny fahita mahazatra ity fampisehoana ity, satria sehatra telo lehibe samihafa no hisehoan’ireo mpanakanto. Marihina fa ho entina hanampiana sekoly iray, mitaiza sy mampianatra zaza sahirana sy kamboty, eto an-drenivohitra ny vola azo amin’izany. Eo koa ny fanatanterahana tetikasa hafa mifandraika amin’izay fanampiana ara-tsosialy izay hatrany.